Xadidaadda Kaamerooyinka jirka ee Booliiska | Xalka OMG
Maalin kasta oo dhaafo, tirada dunidan ayaa sii kordheysa. Tani waxay sidoo kale siineysaa koror ballaaran oo xagga teknolojiyadda iyo sayniska. Hadda maalin, waxaan arki karnaa waxyaabo badan oo soosaar fiican oo noo dhow. Waxyaabahan ayaa noo fududeeya nolosheena. Iyada oo ay sii kordhayaan tirada dadka ku nool magaalo weyn, waxaa hubaal ah in ay si weyn u kordhayaan heerka dambiga. Booliska Magaalada waa iney wax ka qabtaan dhibaatooyinka maalin walba. Fududeyntooda, sayniska ayaa naga caawisay iyagoo na siinaya Jirka Worn Cameras.
Isticmaalka Kamarado Jaban
Jirka Worn Cameras wuxuu siiyaa caawimaad weyn nolol maalmeedka booliska. Haddii aan si cad u aragno, markaa waxaan arki karnaa faa'iidooyin badan oo soosaarkan ah. Waxay u dhaqmaysaa sida isha saddexaad qaab ahaan iyadoo la kordhinayo dareenka aragtida qofka. Waa la dhihi karaa maxaa yeelay mararka qaar qofku kuma arko faahfaahin yar oo ku xeeran indhihiisa. Laakiin kaamirada, wuxuu arki karaa taas mar kale iyo mar kale taasoo u sahlaysa isaga inuu tilmaan ka bixiyo faahfaahinta yar.
Xadidaadaha Kaamirooyinka La Xidhay:
Ka sokow faa iidooyinka kala duwan ee uu jirka xirtay kamarada, waxay leedahay xadad badan sidoo kale.
Aynu si dhakhso leh u eegno qaar ka mid ah xaddidaadaha Jirka Worn Cameras:
Waa mid kale oo ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee waaxda booliisku ay hadda wajahayso maalin. Tani waa xaddidaadda ugu weyn ee kaamerooyinka jirka xiran. Qorista xogta meelaha dambiyada wax dhib ah ma leh laakiin si joogto ah u ciyaarista duubitaanno dhaadheer ayaa waliba u baahan meelo badan oo keydin ah. Taasi waxay ka dhigaysaa xaddidaad weyn oo kaamirooyinka jirka xiran oo aysan kaydin karin xogta la duubay. Maxaa dhacaya haddii ay baabi'iyaan oo tirtiraan xogtii hore? Waxay sidoo kale aad ugu xumaan lahayd waaxda. Waxaan arki karnaa kiisas sanado jir ah oo si lama filaan ah uga furmay meel aan jirin. Sidaa darteed, iyagu ma qaadi karaan talaabadan oo tirtirayaan xogtii hore. Waa inay hayaan dhammaan xogta taas oo dhibaato weyn u ah waaxda.
Waxaan sidoo kale aragnay in kaamirooyinka jirka xiran ay xad u leeyihiin waxa ay duubi karaan markiiba. Sheygan wuxuu u dhaqmaa sidii xayiraad weyn oo loogu talagalay kamarada. Dhibaato ayey u keeni doontaa saraakiisha. Aynu ka soo qaadno in booliiska shaqsi baaritaan u socdo. Kaameeradu waxay duubtaa qaybta oo dhan laakiin isla markii uu galo qaybta ugu muhiimsan, xadka kamaradu wuu buuxsamayaa oo joojiyaa duubista. Sidaa daraadeed, tani waa xaddidaad weyn oo kaamirooyinka jirka xirtay taasoo siineysa faa'iido darro weyn.
Waxa kale oo saameeya waxqabadka kaamirooyinka jirka xirtay waa waqtiga baytariga. Badanaa, kaamirooyinka jirka xiran waxaa lagu dhejiyaa dhinaca hore ee sarkaalka booliiska. Uma muuqato in la dallaci karo marwalba markaa waa inuu ku shaqeeyaa batari. Waqtiga batterigu waa inuu noqdaa mid waara. Laakiin haddii ay dhacdo duubitaanno dhaadheer oo sida badan qaadata waqti badan, kamaradahaasi badanaa waxay hoos u dhigayaan baytariyadooda. Si aad u dallacdo kuwan, baytariyada waa in laga saaraa kiiska. Tani waa xaddidaad weyn oo kaamirooyinkaan u baahan in la xalliyo.
Ruqsadaha iyo Isticmaalka Saxda ah:
Mid ka mid ah su'aalaha ugu waaweyn ee waaxaha booliisku ay la kulmeen qiimeynta Jirka Worn Cameras waa sida loo garto nooca saraakiisha ay tahay inay diiwaan geliyaan.
Haddii aan si fiican loo marin, askartu way isticmaali kari lahaayeen kamaradaha jirka meelaha ay ahayd inaysan u isticmaalin isla waqtigaasna, waxay ku wareejin lahaayeen kaamarooyinkooda meeshii loo baahnaa. Tani waxay baabi'in lahayd caddeyn badan oo muhiim ah goobta.
Si sax ah uma dhihi karno in tani ay tahay xaddidid kaamirooyinka jirka xiran laakiin waa xaddidaadda waaxda isticmaalkeeda.
Waxaa jira laba wajiyood oo waaweyn oo lagu muujiyey daraasado dhowr ah marka ay tahay ikhtiyaarka goorta la duubayo. Hal dariiqo waa in loo baahan yahay saraakiishu inay diiwaan geliyaan dhammaan kulamadii ay la yeesheen shacabka, oo ay kujirto oo keliya ma aha inta lagu jiro wicitaannada adeegga laakiin sidoo kale inta lagu jiro wadahadallada aan rasmiga ahayn ee lala yeesho shacabka. Sida ku xusan Madasha Dadweynaha, u baahan saraakiisha in ay qoraan kulan kasta oo lala yeesho dadweynaha waxay wiiqi karaan xuquuqaha asturnaanta xubnaha bulshada waxayna dhaawici karaan xiriirrada bulshada iyo booliiska. Sidaa darteed, tani dib u dhac weyn ayey u tahay Markhaatiyaasha badankood waxay doorbidaan in aan lagu arag kaamirada ama la duubin. Tani waxay dhibaato ku noqotaa saraakiisha inta ay su'aalo waydiinayaan.
Midda labaad, habka ugu caansan waa in loo baahan yahay saraakiishu inay firfircoonaan kaamirooyinka jirkooda kaliya markay ka jawaabayaan wicitaannada adeegga iyo inta lagu jiro howlaha fulinta sharciga la xiriira sida qabashada, baarista, joogsiga taraafikada, wareysiga, iyo baacdinta. Ku qorista dhacdooyinka goobta dembiga nool waa inay ka caawisaa saraakiisha inay soo qabtaan odhaahyada lafdhabarta ah ee waxtar u yeelan kara baaritaanka dambe.
Way iska cadahay soo bixitaanka teknolojiyad cusub iyo shabakadaha bulshada inay beddeleen sida dadku u tixgeliyaan asturnaantooda, laakiin duubista ay sameeyeen kaamirooyinka jirka xirtay waxay u saamaxi karaan adeegsiga tikniyoolajiyadda wajiga ah.
Isticmaalka Jirka Worn Cameras wuxuu siiyaa saraakiisha fursad ay ku duubaan xaaladaha xasaasiga ah, laakiin sidoo kale inay ku diiwaan geliyaan guryaha gaarka loo leeyahay markay qabanayaan ama ay sameynayaan cilmi baaris. Marka taa la eego, qaar ka mid ah hay'adaha sharci fulinta ayaa qaatay mowqif ah in saraakiishu ay xaq u leeyihiin inay ku diiwaan geliyaan guryaha gaarka loo leeyahay ilaa iyo inta ay xaq u leeyihiin inay sharci ahaadaan. Tan, natiijada, waxay khalkhal gelisaa asturnaanta dad badan oo aan u fiicnayn booliiska.
Xadidista kaamirooyinka jirka xiran ee Booliska ahaa kii ugu dambeeyey: September 26th, 2019 by admin
2018 Wadarta Views 10 Views Maanta
Shirkadda Amniga - Sida Saamaynta ay u leedahay Booliska Ceymiska Kaamirada Dheereeya